safalstories Archives - Page5of6- Safal Stories
खुशी कसरी भेटिन्छ ?
भौतिक सुविधाहरुले जीवनशैलीलाई सहज बनाएतापनि मानिस दिनप्रतिदिन खुशी देखी टाढा गइरहेको छ । खुशी खोज्नकै लागि चलिरहेको अस्तव्यस्त दैनिकीमा मानिसले आफूलाई नै...
असफल हुनबाट कसरि बच्ने ?
कुनै पनि काम आफूले सोचेको अनुसार नहुनुले मन खिन्न हुन्छ, मान्छे टुट्छ र डिप्रेसनमा समेत जान सक्छ । तर सफलता भनेको ती...
नराम्रा बानीहरु कसरी हटाउन सकिन्छ ? ५ टिप्स
सफलता या असफलता भन्ने परिणाम आएपछि मात्र हामीले आफूलाई मूल्यांकन गर्ने गर्छौं । त्यो नतिजालाई मूल्यांकन गर्दा हामीले अहिलेको वर्तमान परिस्थिति र...
1...4566 पृष्ठ 5